Chhaharaa | याक्थुङ्वाहरु हो अनाहकमा विवाद नगरौं
याक्थुङ्वाहरु हो अनाहकमा विवाद नगरौं
राष्ट्रिय जनगणनामा जाति र पुर्खाको भाषा÷मातृभाषाको महलमा याक्थुङ वा लिम्बू के लेख्ने भन्ने जो विभाजित बहस छ, राज्य गुमाएका, हेपिएका, थिचिएका समुदायको दुर्भाग्य यहि हो । जित्नेले गिजोलिदिएको÷रोपिदएको पहिचानको दलदलमा झगडा गरिरहेका मनुवाहरु
अब लिम्बू नै किन लेख्नुपर्ने ? वा याक्थुङ नै उल्लेख गर्नुपर्ने किन ? को हो याक्थुङ वा लिम्बू समुदाय ? झगडा हुँदाहुँदै पनि यी दुवै प्रश्नहरु जातीय पहिचान संरक्षणसंग नै सम्बन्धित हुनु सकारात्मक पक्ष हो ।
यथार्थमा याक्थुङ भनिएकाहरु नै लिम्बू हुन, लिम्बू नै याक्थुङ हुन भन्ने कुरामा समुदायगत रुपमा कसैको बेग्लै मत छैन । नामाकरणको सन्दर्भ ‘लिम्बू’ (भहयलथm) अर्काेले राखिदिएको नाम
पर्याे । ‘याक्थुङ’ (भलमयलथm) मौलिक नाम भयो । हामी याक्थुङ् वा याक्थुङवा हौ, हामी याक्थुङ पान (लिम्बू भाषा) बोल्छौ भन्दै आएका समुदाय नै हौ । ‘याक्थुङ’ समुदाय भन्ने सत्य हो तर ‘लिम्बू’ भन्ने जातीय नाम नै सारा दुनियामा स्थापित भईसक्यो ।
आगामि जनगणनामा पछिल्लो समयको सरकारको लिखतहरुमा स्थापित लिम्बू नामलाई निरन्तरता दिँदा मात्र पहिचान बच्छ, नत्र हामी चिप्लिन्छौ भन्ने एकथरी छौ भने अर्काेथरि याक्थुङ् हाम्रो यथार्थ जातिगत नाम नराखे पहिचानको कुरा गर्नु व्यर्थ छ, याक्थुङ लेख्नैपर्छ भन्नेहरु छौ ।
हामी यथार्थ खोजि गर्ने क्रममा
छौ । तेसैको फलस्वरुप पाथिभरा देशविदेशमा चर्चित छ तर मुक्कुमलुङ हुनुपर्छ भनेर संघर्षरत छौ । कैयौ याक्थुङ गाउँठाउँको नामहरु परिवर्तन भएका छन् । पुरानै नाम हुनुपर्छ भन्ने अभियानमा छौ ।
दुबैको तर्क आ–आफ्नो ठाउँमा दर्विलो भए पनि हाम्रो एकतामा यसले असर पारेकै छ । राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्याङ्कमा असर पर्याे भने ठुलो मूल्य चुकाउनुपर्ने
सरकार वा तथ्याङ्क विभाग के चाहन्छ ?
जातीय समुदायहरुको सहि तथ्याङ्क संकलनमा विभाग विल्कुल सम्बेदनशिल छैन । उसले समुदाय विखण्डित, विभाजित वा गिजोल्याउन चाहन्छ ।
२०५८ सालको जनगणनामा तथ्याङ्क विभागले लगभग ५०० भन्दा वढि जातिय समुदायको लिष्ट आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमा पठाउदै यी समुदायहरु बेग्लै जाति हुन वा कुन समुदायभित्र पर्छन भनेर छुट्याईदिन सहयोग मागेको थियो । म प्रतिष्ठानमा नै काम गर्ने भएकाले हामीलाई थाहा भएसम्म छुट्याएर पठाईदिएका थियौ ।
अब प्रश्न के हो भने,
के तथ्याङ्क विभागले जातिमा याक्थुङ र लिम्बू बेग्लै जाति हो भनेर तथ्याङ्क निकाल्ने गवाँर काम गर्ला त ?
के याक्थुङ र लिम्बू भाषा बेग्लै भाषा हुन् भनेर तथ्याङ्क निकाल्न मिल्छ र ?
तथ्याङ्क विभागले कुनै समुदायको जातिगत र भाषागत नामाकरण १० वटा भए १० वटै सुचिमा राख्ला त ?
विगतमा राई भाषा भनेर पनि राखेको पाईयो, जुन गलत छ । राई भाषा भन्ने नै हुदैन । यसबाट विभागको उचयाभककष्यलबष्किm मा प्रश्न उठेको छ ।
समुदाय र तथ्याङ्क विभागले गर्नुपर्ने उपाय के हो भने याक्थुङ भनेको लिम्बू र लिम्बू भनेको नै याक्थुङ हो भन्यो भने समस्या समाधान हुन्छ ।
समुदायको नामाकरण चै याक्थुङ (लिम्बू) वा लिम्बू (याक्थुङ) उल्लेख गर्नु उपयुक्त हुन्छ । सोहि वमोजिम भाषालाई मिलाउनुपर्छ ।